SuperGIS na Desktọpụ, ụfọdụ atụnyere ... - Geofumadas
Machị, 2013 Geospatial - GIS, GvSIG, SuperGIS
SuperGIS bụ akụkụ nke ihe nlereanya ahụ Supergeo nke m kwuru banyere ya ụbọchị ole na ole gara aga, na-enwe ezigbo ihe ịga nke ọma na kọntinent Eshia. Mgbe m nwalere ya, lee ụfọdụ n'ime mmetụta m weere.
N'ozuzu ya, ọ bụ ihe ihe mmemme ọ bụla ọzọ na-eme. Ọ nwere ike na-agba ọsọ na Windows, ikekwe ọ mepụtara na C ++, yabụ na ọ na-agba ezigbo ezigbo ọsọ; ọ bụ ezie na nke a na-eweta ọghọm nke ịghara ịba ụba ... nsogbu nke ndị ọzọ pere mpe edozila n'ụzọ.
N'ihe banyere ọdịdị, ọ dị ka ArcGIS nke ESRI, na-ese n'elu mmiri na okpokolo agba, nchịkọta oyi akwa, dọrọ na dobe. Ọzọkwa, mgbagha nke ihe owuwu na ihe ọkụkụ na-egosi oke akara iji nọgide na-asọmpi na ihe nlere a; ihe enwere ike ihu na ndọtị ya ndị bụ isi:
Onye nyocha gbasara mbara igwe, Network, Topology, Statystical Spatial, 3D, Onye Nyocha Ọdịdị.
Na mgbakwunye, a na-agbakwunye ya na ngwa ndị etinye na desktọọpụ nsụgharị: SuperGIS Data Manager, nke kwekọrọ ArcCatalog na SuperGIS Ihe Ntụgharị, nke ya na ArcToolbox.
Ebumnuche nke ịrụ ọrụ ngo bụ faịlụ xml omenala, na ndọtị .sgd nke na-eme dịka faịlụ .mxd / .apr na ArcGIS ma ọ bụ faịlụ gvSIG .gvp. Enweghi mgbakwunye iji bubata ọrụ site na usoro GIS ọzọ ma ọ bụ ezie na usoro a dabeere na otú IMS ga-esi gụọ ọrụ ahụ, ọ na-akwado data n'ime Personal (mdb), MS SQL Server, Oracle Spatial and PostgreSQL Server geodatabase.
The .sgd usoro nwere mgbanwe abụọ; nke dị ugbu a ebe ọ bụ na mbipute 3.1a na-ebubata nke mbụ nke 3.0 ahụ.
Na usoro mgbasa ozi:
DWG, ruo na nsụgharị 2013
Ihe ọ bụla yiri ka ọ bụ ihe ndị ọzọ na-eme, ọ bụ ezie na ebe a ka ọ pụtara na usoro mgbasa ozi dwg, dgn, dxf ghotara nsụgharị ndị na-adịbeghị anya.
Amaghị m otú ha ga-esi nweta ya, mana ọ bụ otu n'ime adịghị ike nke Manifold GIS, gvSIG na sọftụwia ndị ọzọ mepere emepe. N'ihe banyere faịlụ dgn / dwg, ọ na-enye ha ohere ịkọwa ya, gbanyụọ ya, gbanye ya, ọ bụ ezie na ọ bụ naanị site na oyi akwa (ọkwa), ọ bụ ezie na a na-ebu ya dịka ntụaka; dezie ya na ị nwere mbupụ ya .geo ma ọ bụ .shp usoro. Ọ bụ ihe na-akpali mmasị ịkọwapụta na usoro .geo na-akwado polygon, polyline na point; multipoint na-akwado naanị .shp mgbe ị na-eke akwa ọhụrụ.
Gụọ Microstation dgn na nsụgharị 8 na AutoCAD dwg na mbipute 2013… ọ kwesịrị otuto. Ọ bụ ezie na gvSIG nwere uru na ọ nwere ike idezi dwg, dxf na kml, ebe SuperGIS nwere ike idezi shp na nke ya .geo ndọtị. Formatdị vector ọzọ nwere ikikere bụ .slr (Supergeo Layer File), nke ị nwere ike ịrụ ọrụ na mbadamba site na iji SuperSurv, yana site na ndị ahịa desktọọpụ.
Site na SuperGIS Data Converter i nwere ike ime mgbanwe n'etiti ọdịdị mbụ, gụnyere usoro mpempe akwụkwọ (Google Earth), e00 (ArcInfo), sef (Standard Exchange Format).
Na nhazi ụzụ:
SGR, nke bụ usoro SuperGIS dị mma
The .sgr format bụ ihe onwunwe na Supergeo; na nke a, ọ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ma nhazi na ọkachamara pụrụ iche na onye nyocha Image.
O nwere ọghọm na ọ naghị agụ ENVI, SPOT faịlụ nke mmemme dịka Manifold GIS na gvSIG na-akwado. Ikike onyogho onyogho bu ihe zuru oke na ihe gvSIG / ArcGIS na eme.
Site na SuperGIS Data Ntụgharị ị nwere ike ịme mgbanwe n'etiti usoro img, gis, lan (Erdas), tif, ecw, sid, jpg, bmp, na ASCII txt.
Na ụkpụrụ OGC
WMS (ọrụ nlekọta weebụ)
WFS (ọrụ ntanetịime ụwa)
WCS (ọrụ mkpuchi weebụ)
WMTS. Nke a bụ usoro maka iji data mosaic (Tiles)
Nke a na ọrụ ndị ọzọ adịghị abịa na nbudata nbudata ahụ, agbakwunyere ha dịka ntinye: OGC Client, GPS, Client Geodatabase, Client na Desktọpụ SuperGIS na Client na Desktọpụ Image Server.
A na-akwado ikpe nke usoro kmz naanị na ndọtị 3D Analyst. N'ihe banyere usoro ntanetị, ha na-akwado .geo, na-enwe ike ịbubata site na iji DataConverter site na faịlụ faịlụ, yana data ntanetị nke nwere ike ibubata site na faịlụ faịlụ na sgr.
Akụkụ a na-adọrọ uche m mgbe niile, nke n'ozuzu na-amanye anyị iji usoro CAD iji wuo data na mmemme GIS mgbe ha na-arụ ọrụ. Ọ bụ ọganihu dị mkpa na nwere gvSIG na Quantum GIS na nke a, tinyere nchịkọta ndị ọzọ dịka ikpe ahụ Ngwa OpenCAD nke anyị ekwesịghị iji mkpesa ọzọ.
N'ihe banyere SuperGIS, ọ na-enye ohere idezi otu ma ọ bụ karịa akwa, na ụdị ọdịnala. E gosipụtara ndị nwere ndọtị .geo na .shp, ị nwere ike ịchekwa ma kwụsị mbipụta ahụ. Na mgbakwunye, n'otu taabụ enwere ojiji edezi aha, nke ọ dabara na pavụ gvSIG:
Ka anyị lee ihe atụ CAD ndị AutoCAD, gvSIG na SuperGIS nwere, na-echebara m ndepụta nke nhọrọ AutoCAD kachasị mma.
Ee e Nye iwu AutoCAD gvSIG SuperGIS
2 Poly akara
4 Ndabere onwe
5 Iji dịrị n'otu
10 Iji gbanwee
13 Dezie ngwaọrụ
14 Iji gbawa
21 Iji gbatịa
23 Ejiri ya
Nke mbụ 14 (1 ka 14) nọ na ndepụta m 25 kachasị eji iwuỤfọdụ n'ime ha abụghị kpọmkwem ihe nhata, dị ka: -bind / do block
-autopolygon / boundaryHere, ọ bụ ihe ịtụnanya na SuperGIS n'otu iwu nyere otu ihe karịrị otu, nke na-apụta n'ụzọ e si eme ya, dịka okwu "Sketch" nke gụnyere ahịrị, polyline, isi na multipoint.
Ihe ederede geometry na-edezi iwu dị iche iche na-edezi, na-agbatị aka, na-eme ka ihe dị mma.
Enweghị iwu anyị ji na CAD, dịka Array, polygon mgbe niile, ellipse. Na omume ha adịghị ngwa ngwa ọ bụ ezie na gvSIG jikọtara ha dị ka akụkụ nke ime ihe dị mkpa na CAD.
Endgbatị na Ndekota Detuo kwụpụta. Ọzọkwa nkwaghari iwu na-enye ohere ịbanye nhazi njikwa.
Arụ ọrụ ahụ dị ka ihe bara uru, ọ dị ka SuperGIS bịara na nke a yana ọtụtụ ọrụ bara uru na ezigbo ndị ọrụ. N'ihe banyere nkenke, enwere nhọrọ ọnyà maka etiti, nkwụsị, na ebe kacha nso. Ọ bụ ezie na enwere ike ịhazi ya ma ọ bụrụ na etinyere ya na nsọtụ ma ọ bụ ogwe ya na otu nnabata na kwa akwa.
Site n'iwu nke ebulite windo welie elu; Enwere ike ịmepụta ya site na nhazi, anya / isi, anya / anya ... ọ bụ ezie na ụfọdụ ahụrụ m arụmọrụ ahụtụbeghị ihe ... ọ chọrọ omume dị ka ngwa ọhụụ.
Ọzọkwa, achọrọ iwu ka achọrọ maka usoro GIS, nke na-enweghị mmasị na CAD, dị ka:
Akụkụ (nkewa), Nkebi na akụkụ, Izugbe, Ezigbo (ezigbo), dịkarịsịrị maka ọrụ GIS. Na mgbakwunye na usoro ndị a na-ahụkarị na geoprocessing nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Nchịkọta / mado nke ihe anyị ma.
Na ọkwa nke nhazi maka ibipụta, m ga-eleba ya anya n'isiokwu na-esonụ; ebe ọ bụ na enwere m ndapụta na m ga-echere oge ahụ ịnweta mmepe multiframe nke ha na-arụ ọrụ na ya, nke m tụpụtara na ọ ga-ekwe omume ịchekwa steeti ndị na-ekwu okwu, iji nwee ike ịwụnye data data dị iche iche n'otu nhazi ahụ. E kwere m nkwa inweta nke a maka SuperGIS Desktọpụ 3.1b na Q2013 XNUMX; yiri ihe CadCorp ma ọ bụ Manifold GIS na-eme.
N'ikpeazụ, ọ dị ka ngwá ọrụ siri ike na desktọọpụ GIS ọkwa.
Maka ndị chọrọ ịnwale ya,
Ebe ị nwere ike ibudata na Desktọpụ SuperGIS
Previous Post«Previous Nke envelopu na-abụghị teknụzụ
Next Post 3 Magazin na ahụmịhe ise nke mpaghara geomaticNext »
Otu azịza na "SuperGIS Desktọpụ, ụfọdụ atụnyere ..."
Rosario kwuru, sị:
Daalụ maka ozi ahụ.- Download ma gbalịa!